traintips Archives | Page 2 of 5 | Save A tareenka
Ma dheer ka dib Tunnel Channel sida badan tixraac sida Tunnel Eurostar furay in 1994, waxaa lagu magac daray mid ka mid ah mucjiso Toddoba ka mid ah aduunka Modern. Sida laga soo xigtay Ururka American ee Injineerro Civil, horyaalka in uu si wanaagsan u qalmay. It put the…
U yeerida dhammaan qashinka iyo doondooniyaasha! Ma rabtaa inaad ogaato waxa ugu fiican dhibcaha bilowga socodka iyo sida lagu tago tareen? Markaas aad tahay meel sax ah! This article was written to educate about Train Travel and was made by Save…
hotels taariikhiga ah ee Europe ma yihiin aragti naadir ah, gaar ahaan magaalooyinka waa weyn oo leh taariikh qani ah. Paris, London, Rome, Munich, Vienna - dhammaan magaalooyinka waxay leeyihiin meelo qurxoon in ay bixiyaan. Dalxiisayaasha doonaya xoogaa raaxo dhaqameed ah dhib kalama kulmin inay helaan meel…
Qorshaynta fasax ah in Europe mararka qaarkood waxay qaadan kartaa halka a. Waayo, socotada la dhaafin, waxaa maalgelin weyn waqti si ay baaritaan ugu logistics safarka iyo soo qaado meel ay joogaan. Waa in aad u tagto dhan yahay ama ma? Sidee baad u socotaa si aad u hesho waxaa, by…
Disneyland Paris inta badan waa caalamiga ah Disney Park ugu horeysay ee ay taageerayaal badan in ay soo booqdaan. Ma rabtaa in aad ogaato sida ay u qorsheeyaan ay fasax Disneyland ugu fiican ee Paris lagu jiro xagaaga iyo jiilaalka? Markaas aad yimaadeen meeshii xaq u! Waxay ku taallaa in Marne-la-Vallee, a suburb of…
Rasmi ah basbaaska leh oo xoog leh dhadhan cajiib ah, cuntada Chinese wanaagsan yahay mararka qaar adkaa inay u yimaadaan in Europe. Si kastaba ha ahaatee, waxaa war fiican ah in ay jiraan maqaayado Chinese weyn ee Europe - leedahay in aad ogaato meesha aad ka heli, iyo sidaad u tagi karto….